शब्द-सिर्जना : अँधेरीे रातको एउटा कथा - मातृका पोखरेल
पसलभित्र फट्याङग्रे काका भारी मिलाउदै थिए । उनले पनि मलाई देख्ने बित्तिकै हाँसेर स्वागत गरे । उनीसँग कटारीबाट मरुवा खोला हुदै आहाले, वरपानी, राउतखर्क लिम्पाटार हँुदै चौबिस जङ्घार सोरुङखोला तरेर धेरै पटक गाउँ पुगेको छु । किन हो किन मसँग हिँड्न फट्याङ्ग्रे काका रमाइलै मान्थे । मलाई भेट्ने बित्तिकै उनी खुसी देखिए ।
अलिक पल्लो पसलमा बैदार कटुवाल पनि केही किनमेल गर्दै रहेछन् । बैदार कटुवालले आफ्नो भारी बोक्न लिएर आएका रहेछन् फट्याङग्रे काका र डल्ले कान्छालाई । कटुवाल हाम्रो गाउँ ठाउँका आर्थिक अवस्थाले सम्पन्न मान्छे थिए । काठमाडौमा बसेर लामो समय बैदार जागिर खाएका कारण उनको परिचित नाम नै बैदार कटुवाल रहन पुग्यो । मैले कतैकतै सुनेको थिएँ उनको वास्तविक नाम अर्कै रहेछ प्रेम बहादुर कटुवाल ।
राति भए पनि घर पुग्नुपर्छ । नत्र भोलि बेलुका घर पुग्न सकिँदैन । बैदार कटुवाल केही कडा स्वरमा बोले ।
भोलि बेलुका नपुगेर के भयो पर्सि बिहान त पुगिएला नि ! डल्ले कान्छाले पनि हिड्नु पर्ने उकालोतिर हेरेर भन्यो ।
सधैँ मिठो भात खाने दाउ गर्छस् गधा ! रिसको झोकामा भरखरै खोलेको छाता पनि बन्द गरे बैदार कटुवालले ।
के मिठो भात खान दिनु भएको छ र ! बाटामा एक छाक पनि चामलको भात खान पाएको छैन क्यारे । ढाकरबाट निस्किरहेको सङ्गीतात्मक आवाज सँगसँगै डल्ले कान्छाले कडा प्रतिक्रिया जनायो ।
चामलको भात खान त भाग्य लिएर जन्मिनु पर्छ । तँलाई यही पनि बढ्ता भा’को छ बुझिस् । अरू बेलामा पनि रगत चुहिएला जस्तो उनको रातो अनुहार यतिबेला झन् गाढा देखियो ।
हामी चारैजना मरुवा खोलानेरको खेतको डिलमा हिँडिरहेका थियौँ । फट्याङ्ग्रे काका हामी भन्दा केही अघि थिए तर दुई जनाको सम्वादलाई उनी सुनिरहेका थिए ।
सकुञ्जेल सम्म त हिँडिन्छ । नसकेपछि कस्को पो के लाग्छ । शान्त स्वभावको डल्ले कान्छाले आज राम्रैसँग सवालजवाफ ग¥यो ।
हुन त डल्ले कान्छालाई मैले नभेटेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । पोहोरको दसैँपछि म पहिलो पटक गाउँ जाँदै थिएँ । डल्ले कान्छाकै घरको आँगनबाट हाम्रो हिड्ने बाटो थियो । सायद उमेर भन्दा होचो देखिएर उसलाई डल्ले भनेर सम्बोधन गरिएको होला । म भन्दा चार–पाँच बर्षमात्र कान्छो थियो होला उसको उमेर । उसको ठ्याक्कै जन्मदिन फ्टयाङग्रे काकालाई पनि थाहा छैन । डल्ले सानै छदाँ हामी समकालीनहरूको बीचमा ऊ ख्यालठट्टाको विषय हुन्थ्यो । बुढा मानिसहरूले लँगौटी लगाएको त हामीले धेरै देखेका थियौँ तर बच्चाहरू र हाम्रा उमेरका किशोरहरूले लगाएको देखिँदैनथ्यो । कोशी पारिबाट कटारी ढाकर खेप्नेहरूले भने के बुढा के तन्नेरी के किशोर सबै जसोले लँगौटी धारण गर्दथे । तर हाम्रो समाजमा यो चलन क्रमशः हट्दै थियो । हाम्रा समवयका सबैजसोले कट्टु नै लगाउँथे । हामीले थाहा पाउँदा पछिसम्म पनि डल्ले कान्छाको शरीरमा लँगौटी बाहेकको अर्को कुनै कपडा हुदैनथ्यो । ठुलठुला चाडवाडहरू पनि ऊ नाङ्गै बसेर काट्थ्यो । लँगौटी लगाएकोमा हामी उसलाई जिस्कयाउथ्यौँ तर ऊ हाँसेर टारिदिन्थ्यो । हामी त्यसबेला उसको गरिबीको मर्म बुझ्दैनथ्यौं ।
मरुवा फेदी पुग्दा घाम पूरै डुबिसकेको थियो । अरू बटुवा र ढाक्रेहरू बास बस्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए । कोहीकोही भने दाउरा खोज्न जङ्गलतिर लाग्दै गरेका देखिन्थे ।
फ्टयाङ्ग्रे काकाले मरुवा खोलाको अन्तिम जङ्घार तरेर ढुङ्गामा आफ्नो भारीलाई अडेस लगाए । म र डल्ले कान्छो सँगैसँगै थियौ खोलावारि । कान्छाले खोलावारिकै ढुङ्गामा भारी बिसायो र आफू ढुङ्गामाथि आएर टुसुक्क बस्यो । मैले पनि ऊ सँगै छेउको ढुङ्गामा आश्रय लिएँ । बैदार कटुवाल अझ माथि थिए । उनी पसलको बाहिर खटियामा बसेर हामीतिर नियालिरहेका थिए । फ्टयाङग्रे काका भारी बोकेर उकालो लागे । पसलघर सम्म पुग्दा कान्छाले एकटकले आफ्नो बाबुलाई हेरिरह्यो । फ्टयाङग्रे काकालाई अघि कटुवालले आदेश दिइरहेको उसको हाउभाउले बुझिन्थ्यो । काका जङ्गलको बाटो उकालो लागे ।
साँझ परिसक्यो । यो बस्ने बेलामा तपार्इँ किन उकाली लाग्नुभएको ? कान्छाले ठूलो स्वरमा करायो ।
छोराले बोलाएको त फ्टयाङग्रे काकाले सुने तर नसुनेझैंँ गरी अगाडि बढे ।
के गर्ने अब हिड्नै प¥यो नि । मैले डल्ले कान्छासँग बाध्यता देखाएँ ।
यो अपराधीले हामीलाई साह्रै दुःख दिन्छ । मलाई ज्वरो पनि आइरहेको छ । म बिरामी छु भन्ने कुरा त्यसलाई राम्रोसँग थाहा छ । रातको समयमा जङ्गलको बाटो अब कसरी पुग्ने ? कुपोषणले ग्रस्त उसको अनुहारमा फेरि पीडाका धर्साहरू देखिए ।
साँझ परिसकेको छ । तिमीलाई जस्तै मलाई पनि यहीँ बास बस्न मन थियो । तर के गर्ने ? बैदार काकाले मानेनन् । अब हिड्नु सिवाय हामीसँग अर्को उपाय पनि त छैन । मैले डल्ले कान्छालाई सम्झाउदै भने ।
तपाईँ जादै गर्नुस् । म आउदै गर्छु । उसले उकालोतिर हेर्दै भन्यो ।
डल्लेले सामान तलमाथि पा¥यो वा हरायो भने त्यो सवै मूल्य म तँबाट तिराउछु नि बुझिस् फट्याङग्रे । धेरै पछि अझ त्रूmर भएर प्रस्तुत भए बैदार कटुवाल ।
फट्याङग्रे काकाले केही जवाफ फर्काऊन् भन्ने म चाहन्थेँ तर उनी लुरुलुरु हिडिरहे ।
ठूलो आवाज निकालेर बैदार कटुवालले आफ्नो झोला धरको दलानमा राखे । भित्रबाट एउटा महिला स्वर आयो – बाहिर को हो हँ ।
पाहुना है पाहुना । यतातिरबाट बैदार कटुवाल बोले ।
आउन किन ढिला गर्नुभयो ? हामी पर्खिरहेका थियौँ । भित्रबाट फेरि उही महिला आवाज आयो ।
हामीलाई बाहिर बस्दै गर्न भन्दै कटुवाल काका फुत्त घरभित्र पसे । अँधेरी रातको हिडाइ हामी थकित भएका थियौँ र उत्तिकै भोकाएका पनि थियौँ ।
फट्याङ्ग्रे काकाले अँध्यारोमै छामछाम छुमछुम गर्दै दलानको छेउमा भारी बिसाए । हामी दलानमा थ्याच्च बसेका मात्र के थियौँ भित्रबाट रक्सीको कडा गन्ध नाकैसम्म ठोकिन आइपुग्यो ।
फट्याङग्रे काका उकालो भरि केही बोलेनन् । मात्र लुरुलुरु हिडिरहे । केही कुरा सोध्यो र बोलायो भने पनि उनी सुस्तरी जवाफ फर्काउथे ।
फट्याङग्रे काका यति बेला डल्ले कान्छाको अवस्थाले चिन्तित होलान् । उनको परिवर्तित व्यवहारका कारण बारेमा मैले यस्तै अनुमान गरिरहेका थिएँ ।
डल्ले कान्छो कहाँ आइपुग्यो होला ।
म भित्र गुम्सिएको चिन्तालाई मैले रोक्नै सकिनँ ।
ऊ आहालेसम्म निस्किएर बास बस्यो होला । तर ऊ सँग केही पनि खानेकुरा थिएन । आज ऊ भोकै प¥यो । यति राती यहाँ त ऊ आइपुग्नै सक्दैन । अलिकति चिन्ता जाहेर गरे उनले ।
यस्तो राती कसरी आहाले एक्लै आइ पुग्यो होला र । उसले भोग्नुपर्ने कष्टका श्रृङ्खलाहरू एकएक गर्दै म भित्र प्रश्न बनिरहेका थिए ।
होइन ऊ राती एक्लै हिड्न डराउँदैन । यो बाटो थुप्रै पटक भारी बोक्न आइसकेको छ । मैले कुराको टुङ्गो पु¥याउन नपाउदै उनले सामान्य रूपमा जवाफ फर्काए ।
मेरो लागि यो नितान्त नौलो र अचम्मलाग्दो कुरा थियो ।
हो ! बाबु तिमी धेरै सानो हुदाँको कुरा हो । डल्लेकी आमा यही कटुवालकै नातेदार थिई । उसले यही कटुवालको गर्भ बोकेपछि गाउँमा ठूलो हल्ला चल्यो । त्यसपछि गाउँका केही मानिसहरू र कटुवालले समेत यो परिस्थितिबाट जोगाइदिन अनुरोध गरे । बच्चा जन्मेपछि मैले बाबु बनेर न्वारान गरिदिएँ । त्यसबापत मलाई कटुवालले एउटा लैनो गाई दिने सर्त थियो । तर अपराधीले लैनो गाईको ठाउँमा थारो गाई मात्र दियो । यो कुरा तिम्रो लागि नयाँ लाग्यो होला । यति भनिसकेर फट्याङग्रे काका केही छिन मौन बसे ।
तपार्इँले विवाह चाहिँ गर्नु भएन ? म उनीबाट अरु थप कुरा सुन्न चाहन्थे ।
सौर्य दैनिक, २०७४ साल असोज ११ गते बुधबार
Posted by शब्द-यात्रा at 6:05 AM